च्याट. यो छ को एक नयाँ पुस्ता, भिडियो च्याट. स्विडिश
मान्छे सबै दुनिया भर देखि ल्याउन आफ्नो शो मा»स्विडिश सुन्दरता»भिडियो क्लिप. प्रत्यक्ष संगीत, बहस, बेमतलबको जिस्क्याइले र मजा खेल । एक रोचक व्यक्ति कुरा गर्न देखि हृदय हृदय वा एक आकर्षक केटी संग इश्कबाज. तिनीहरूलाई थुप्रै सिर्जना आफ्नै देखाउन र झन् लोकप्रिय बनेको नेताहरूको बीचमा धेरै ग्राहकहरु र प्रशंसक । कसैले खेल्छ अनलाइन गीतहरू को मा गिटार. कसैले गाइरहेका छ कराओके र आफ्नो आवाज दर्शक । धेरै प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट छन् खाना पकाउने देखाउँछ । र केही बस आमन्त्रण गर्न दर्शक एक बार्बिक्यु वा पार्टी । किनभने यो नीरस हुन्छ जब घरमा सारा संसारमा को पूर्ण छ र अनपेक्षित सभाहरू. छोराछोरीलाई रूपमा, तपाईं को धेरै को सपना देख्यो लोकप्रिय बन्ने वा प्रभावशाली मानिसहरूलाई देखाउन । चाहन्थे, मान्यता गर्न सडकमा मा प्राप्त र, तर, दुर्भाग्य, वर्ष भन्दा, हामी महसुस गर्न आउन छैन भनेर सबै कुरा यति सरल छ, र यो धेरै गाह्रो छ लागि दर्शक । यस गर्न, तपाईं माध्यम जान आवश्यक को एक नम्बर चयन, प्रशाशनिक तन्त्र, र पनि भ्रष्टाचार । र एक परिणाम रूपमा, सपना मर्छ र बाटो दिन्छ कठोर वास्तविकता छ । तर, भाग्यवश, यो छैन त्यसैले आशा नभएको भनेर पटक परिवर्तन गर्दै, बन्ने छ अधिक लोकप्रिय हरेक वर्ष पाता र एक विशाल दर्शक । र, त्यहाँ छन्, लाखौं को एक दर्शकहरु.
यो एक नयाँ संसारमा को सम्भाव्यतालाई, छ कुनै एक देखि तपाईं रोक चलिरहेको आफ्नो शो, र भने, तपाईं एक प्रतिभा छ, यो निश्चित हुनेछ लोकप्रिय छ । धेरै रोचक कारण शानदार र रोचक. तिनीहरूलाई दिन भनेर र सुरु विजेता आफ्नो समर्थक र प्रशंसक तुरुन्तै । तर त्यो सबै छैन.
सिर्जना गर्न सक्छ, यसको आफ्नै
भेला सबैभन्दा होनहार उपस्थापक अन्तर्गत आफ्नो पखेटा संग आएको, एक टीवी च्यानल नाम, लोगो, छनौट आफ्नो अद्वितीय शैली र एक कदम अगाडि । तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ सुझाव को धेरै प्रयोग, भुक्तानी सेवा, वा बस कुरा घोषणा गर्न आदेश ।
वैकल्पिक संग अधिक बालिका →